Iibhedi zezibhedlele ziyathengiswa, amaxabiso ezinto zokulala esibhedlele amaBane-Annecy
Isinki yokuhlikihla yesinyithi engenasici
Oomatshini baka-Annecy baqala ngo-2012, ukuvelisa iibhedi zesibhedlele, emva koko bandise wonke umgca wempahla yesibhedlele. Ngoku singumzi mveliso kunye norhwebo oludibeneyo lokubonelela abathengi ukuba bayeke ukuthenga. Uluhlu lwethu lweemveliso lubandakanya: iimpahla zesibhedlele, izixhobo zotyando kunye neemveliso zongxamiseko njl.
Emva kophuhliso olungaphezulu kweminyaka eli-8, u-Annecy wayenabasebenzi abangaphezulu kwe-100, apho, abasebenzi abaqeqeshiweyo nabanobuchwephesha ngaphezulu kwabantu abali-10, ii-asethi ezijikeleze ukuya kwi-1, 000,000USD indawo yolwakhiwo ziimitha ezi-2000.
1. Xa umsebenzi wokudlula wasekhohlo nasekunene kufuneka, umphezulu webhedi kufuneka ubekwindawo ethe tyaba. Kwangokunjalo, xa umphezulu webhedi yangasemva uphakanyisiwe kwaye wehlisiwe, umphezulu webhedi esecaleni kufuneka wehliselwe kwindawo ethe tyaba. 2. Ungaqhubi kwiindlela ezingalinganiyo, kwaye wenze ...
1. Phambi kokusebenzisa ibhedi yezonyango yombane esetyenziswayo, jonga kuqala ukuba ingaba intambo yombane iqhagamsheleke ngokuqinileyo. Nokuba intambo yesilawuli inokuthenjwa. 2. Intambo kunye nentambo yombane ye-actuator ehambelana nomlawuli ayiyi kubekwa phakathi kwekhonkco lokuphakamisa kunye nebhedi ephezulu nasezantsi ...
1. Ukhuseleko kunye nozinzo lweebhedi zabongikazi. Umandlalo oqhelekileyo wokonga sisigulana esingakwazi kuhamba kakuhle kwaye silele ebhedini ixesha elide. Oku kubeka phambili iimfuno eziphezulu zokukhusela kunye nokuzinza kwebhedi. Umsebenzisi makangenise isatifikethi sobhaliso kunye nelayisensi yemveliso o ...
Isibhedlele i-AC-AS009 esibhedlele esingxamisekileyo ...
Itafile ye-Gynecological AC-GEB001
I-AC-ST002 yezigulana ezolulwa iTroli kwinqwelo
AC-MB016 Imisebenzi emibini yoBhedlele weSibhedlele ...
I-AC-MB009 yeMisebenzi eMithathu yokuNyanga abaguli ...
Inqwelo yeTroli ye-AC-ET027 engxamisekileyo
I-AC-ET013 yeTroli engxamisekileyo yeTrash Crash
Inqwelo yeTyoli yoNyango, Itroli yeZonyango, Itroli yesibhedlele, Itroli yeLaptop, Itroli yoNesi engenazingcingo, Itroli yoNyango ngeeDraw,